Guusha difaaca Badda waa Guul Wadareed Qaran, waa arrin ka mug weyn in hal qof lagu bogaadiyo. | Dayniile.com
Home Warkii Guusha difaaca Badda waa Guul Wadareed Qaran, waa arrin ka mug weyn...
Guusha difaaca Badda waa Guul Wadareed Qaran, waa arrin ka mug weyn in hal qof lagu bogaadiyo.
1. Avv. Muna Sharmaan oo laheyd hal abuurka fikradda Sharci ee aanu dacwada ku oognay waqti haboon, isla markaana iyadu soo xushay qareenada Soomaaliya, xubinna ka aheyd.
2. Marwo Fawzia Haji Adan oo iyadu fududeysay in fikradda iyo hal abuurka Muna Al Sharmaan ay gaarto Madaxda Dowladda Soomaaliya, isla markaana farsamo ahan door weyn ka cayaartay wada xaajoodyadii Kenya lala galay 2013/2014 si loo buuxiyo shuruuda Koowaad inta aan Maxkamadda la tegin, oo aheyd in la muujiyo in arrinta lagu dayay wadaxaajood, loogana quustay.
3. Dr. Abdiweli Sheikh Ahmed, Prof. Mohamed Osman Jawaari iyo Prof. Hassan Sheikh oo kulamo badan oo xasaasi ah ka dib go’aansaday in ay Soomaaliya Maxkamadda aado.
4. Kooxdii Khubarada Soomaaliyeed ee Habeen iyo Maalin u soo jeeday isku dubaridka dukumentiyada/qariidadaha iyo caddeymaha kale ee ay Soomaaliya daliishatay sida Dr. Ahmed Ali Daahir Xeer Ilaaliyih hore ee Qaranka, Prof. Admiral Faarax Qare iyo AUN Enj Saalixi.
5. Madaxweyne Farmaajo, oo muujiyay hal adeyg iyo adkeysi muddadii uu Xilka hayay, ee uu ubabac dhigay culeysyadii siyaasadeed iyo pressure-kii caalamiga ahaa ee dalalka Galbeedku ku doonayeen in ay Soomaaliya dacwada la soo noqoto.
Kuligood waanu bogaadineynaa.
Previous articlePuntland oo Bareej cusub ka hirgalisay Garoowe
Next articleRa iisal wasaraha Etoobiya oo xilal Cusub u magacaabay Somali
Xubno ka tirsan Guddiga doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed oo ku sugan Beledweyne ayaa kormeeray xarumaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada...
Ra iisal wasare Rooble oo u duulay magaalada Baraawe